Yini inverter yamanje futhi yenzelwa ini | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Yini inverter yamanje futhi yenzelwa ini?
IsiJalimane Portillo | | Photovoltaic Solar Amandla
Uma ufaka ama-solar panel wakho uzokwazi ukuthi udinga amadivayisi amaningi ukuze yonke into isebenze kahle. Akuqukethe ukufaka ipaneli yelanga kuphela nokulinda ilanga ukuthi likwenzele wonke umsebenzi. Ukuze ugesi usebenze kahle, uzodinga i-inverter yamandla, phakathi kwezinye izinto.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yini i-inverter yamanje, ukuthi ungayifaka kanjani nokuthi yenzelwe ini?
1 Inverter yamandla ezinhlelweni zamandla elanga
2 Yini i-inverter yamandla okufanele isetshenziswe?
3 I-inverter eguquliwe ye-wave ne-sine wave
4 Ngidinga abatshalizimali abangaki ekhaya lami?
5 Imingcele eyisisekelo
Inverter yamandla ezinhlelweni zamandla elanga
I-inverter yamandla isetshenziselwa ukuguqula amandla kagesi ayi-12 noma ama-24 volt wamabhethri (aqondile manje) ukusebenzisa i-voltage yendlu yama-volts angama-230 (ukushintshana kwamanje). Lapho iphaneli yelanga ikhiqiza ugesi, ikwenza ngomsakazo oqondile. Lo msinga awusisebenzisi ukuwusebenzisa ezintweni ezisebenza ngogesi ekhaya njengamathelevishini, imishini yokuwasha, kuhhavini, njll. Kudinga ukushintshana kwamanje namandla kagesi angama-230 volts.
Ngaphezu kwalokho, lonke uhlelo lokukhanyisa ekhaya ludinga ukushintshana kwamanje. I-inverter yamanje iyakunakekela konke lokhu uma iphaneli elanga selitholile amandla elangeni futhi ligcinwe kubhethri lalo. Inverter yamanje ngu enye yezinto ezakha ikhithi yelanga Esingaba namandla avuselelekayo ngayo emakhaya ethu futhi sinciphise ukusetshenziswa kwamandla ezimbiwa phansi.
Kumele sikhumbule ukuthi ukusetshenziswa kwamandla avuselelekayo kunomthelela ekwehliseni amagesi abamba ukushisa emkhathini futhi kusivumela ukuthi sithuthuke ekuguqulweni kwamandla ngokususelwa ku-decarbonisation ngonyaka ka-2050.
Uma isibani esikudingayo siphansi kakhulu futhi sinentambo encane, ukufakwa kungenziwa ngaphandle kwe-inverter yamandla. Kuvele kuxhumeke ngqo kwibhethri. Ngale ndlela, sonke isifunda sikagesi besizosebenza ngama-volts ayi-12, kuyilapho kuphela kungasetshenziswa ama-V 12 kuphela nemishini.
Yini i-inverter yamandla okufanele isetshenziswe?
Lapho sifuna ukufaka amandla elanga ekhaya, kufanele sazi zonke izinto ezidingekayo ukufakwa kokusebenza kwazo okulungile. Kunezinhlobo eziningi ze-inverter yamandla. Ukukhetha i-inverter yamandla evumelana kangcono nesimo sethu, kufanele ucabangele amandla alinganisiwe namandla aphezulu we-inverter.
Amandla wokuqamba yilokho i-inverter ekwazi ukukunikeza ngesikhathi sokusetshenziswa okujwayelekile. Okusho ukuthi, i-inverter esebenza isikhathi eside futhi isebenza ngokujwayelekile. Ngakolunye uhlangothi, amandla aphezulu yiwo i-inverter yamanje engakunikeza yona isikhathi esifushane. Amandla aphezulu lawa ayadingeka lapho sisebenzisa ezinye izinto zikagesi ezinamandla ukuqala noma ukuba nezinto eziningi ezinamandla ezixhunywe ngasikhathi sinye.
Ngokusobala, uma sichitha isikhathi esiningi ngokufunwa kwamandla amakhulu kangako, i-inverter yamanje ngeke isinike amandla esiwadingayo, futhi izomisa ngokuzenzakalela ukusebenza (ngendlela efanayo kuya lapho "i-jump jump"). La mandla aphezulu abalulekile ukwazi kahle lapho sizosebenzisa izinto zikagesi ezinjengeziqandisi, amafriji, izingxube, imishini yokuwasha, amaphampu wamanzi, njll. Futhi eziningana zazo ngasikhathi sinye. Njengoba lawa madivayisi adinga kuze kube kathathu amandla ejwayelekile esetshenziswa ngogesi, i-inverter yamanje izodingeka ukusinikeza amandla aphezulu aphezulu.
I-inverter eguquliwe ye-wave ne-sine wave
La ma-inverter amanje asetshenziselwa kuphela lezo zinto zikagesi ezingenayo imoto futhi ezilula impela. Isibonelo, ukukhanyisa, i-TV, isidlali somculo, njll. Kulolu hlobo lwamandla kusetshenziswa i-wave wave inverter eguquliwe, ngoba ikhiqiza i-elektroniki yamanje.
Kukhona nama-inverters we-sine wave. Lokhu kukhiqiza igagasi elifanayo elitholwa ekhaya. Imvamisa zibiza kakhulu kunezinguquko zamagagasi eziguquliwe kepha zisinikeza ukusetshenziswa okunwetshiwe. Ingasetshenziselwa i- izinto ezinemishini elula futhi eyinkimbinkimbi, amadivayisi kagesi nokunye, okunikeza ukusebenza okulungile nokusebenza okuhle.
Iqiniso elibalulekile okufanele silinake kuma-inverters amanje ukuthi kufanele ngaso sonke isikhathi sihloniphe amandla imodeli esiyithengile ekwazi ukuyihlinzeka. Ngaphandle kwalokho inverter izolayisha ngokweqile noma ingasebenzi njengoba kufanele.
Ngidinga abatshalizimali abangaki ekhaya lami?
Ukwazi inani lama-inverter amanje owadingayo, kubalulekile ukwazi amandla kuma-watts amapaneli akho elanga okufanele awaguqule ukuhlangabezana nesidingo sikagesi. Lapho sesikubalile lokhu, inani lama-watts lihlukaniswa ngamandla amakhulu asekelwa yi-inverter ngayinye, kuya ngohlobo.
Isibonelo, uma ukufakwa kwethu kukagesi kunamandla aphelele angama-950 watts, futhi sathenga ama-inverter wamanje afinyelela kuma-watts angama-250, sizodinga ama-inverter ama-4 ukuze sikwazi ukumboza leso sidingo samandla futhi sikwazi ukuguqula konke okukhona manje ekhiqizwa kumapaneli elanga abe amandla enye yokusetshenziswa kwasekhaya.
I-inverter yamandla inamapharamitha wokusebenza ayisisekelo ekusebenzeni kwayo. Zimi kanje:
Amandla okuzisholo. Le yi-voltage okufanele isetshenziswe kumatheminali wokufaka we-inverter ukuze ingalayishwa ngokweqile.
Kukalwe amandla. Kukhulunywe ngenhla. Ngamandla i-inverter ekwazi ukuwanikezela ngokuqhubekayo (akumele siwadidanise namandla aphezulu).
Umsebenzi wokulayisha ngokweqile. Lokhu yikhono le-inverter lokuletha amandla aphakeme kakhulu kunalokho elejwayelekile ngaphambi kokulayisha ngokweqile. Lokhu kuhlobene namandla aphezulu. Lokho wukuthi, yikhono le-inverter ukumelana namandla angaphezu kwavamile ngaphandle kokulayisha ngokweqile futhi isikhathi esifushane.
Ifomu le-Wave. Isiginali evela kumatheminali we-inverter yiyona echaza ifomu layo lamagagasi kanye namanani asebenza kahle kakhulu wamandla nobuningi.
Ukusebenza kahle. Kuyafana nokukubiza ngokusebenza kwakho. Lokhu kukalwa njengephesenti lamandla kokukhipha kanye nokufakwa kwe-inverter. Lokhu kusebenza kahle kuncike ngqo ezimweni zokulayisha ze-inverter. Lokho ukusho, kwamandla aphelele awo wonke amadivayisi axhunyiwe futhi asebenzisa amandla, ondliwa yi-inverter maqondana namandla abo okuzisholo. Imishini eyengeziwe ifakwa kusuka ku-inverter, kukhulu ukusebenza kwayo.
Ngalolu lwazi uzokwazi ukwazi ukuthi hlobo luni lwe-inverter yamanje oludingayo ukuze uqedele ikhithi yakho yelanga. Uyemukelwa emhlabeni wamandla avuselelekayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » Photovoltaic Solar Amandla » Yini inverter yamanje futhi yenzelwa ini?
incazelo eyisisekelo eqondakalayo yabangewona ochwepheshe njengami,… ..ngiyabonga kakhulu
Imishini yokuwasha imvelo nezincomo zokuhlonipha imvelo